आँट गरे के हुँदैन ? अन्ततः काठमाडौंलाई लोडसेडिङ मुक्त बनाएरै छाडे कुलमान घिसीङले, यो काम यसरी सम्भब भयो, एक पल्ट सबैले पढ्नुहोला – पुरा पढ्नुहोस्……
आँट गरे के हुँदैन ? अन्ततः काठमाडौंलाई लोडसेडिङ मुक्त बनाएरै छाडे कुलमान घिसीङले, यो काम यसरी सम्भब भयो, एक पल्ट सबैले पढ्नुहोला
बर्षौंदेखि लोडसेडिङको मार खेप्दै आएको काठमाण्डौ अहिले आएर करिव करिव लोडेसेडिङ मुक्तजस्तै देखिएको छ । योपनि सार्वजनिक पद धारण गरेका एक ब्याक्तीको जिम्मेवारीबोधको कारण।
अन्यत्रको विद्युत कटौती गरेर राजधानीमा सप्लाई गरिएर लोडसेडीङ हटाईएको नभई यहीभित्रकै चुहावटलाई नियन्त्रण गरी यसको समुचित वितरणनै लोडसेडिङ करिव करिव अन्त्य हुनुको कारण हो ।
सायद अहिलेसम्म उनि उक्त आयोजनामा हुन्थे त आयोजनाको कामले ठुलो गती पाउने थियो । राजनितीको काउसोले छोएको हरेक क्षेत्र धरासायी भए जस्तै चिलिमेको अगुवाईमा अघि बढेका सबै आयोजनाहरु अपांग बने ।
आयोजनाहरु प्रतीको बिश्वाशले बजारमा २६०० माथी पुगेको चिलिमेको सेयरको बजार मुल्य राजनितिक हस्तक्षेप पछी दिन प्रतिदिन घट्दै अहिले १२०० मा आईपुगेको छ ।
२० वर्षीया युवकको प्रेममा परेकी ३ सन्तानकी यि आमाले एउटै डोरीमा पासो लगाई प्रेमीकै अंगोलोमा त्यागीन् प्राण, तस्विर बन्यो भाइरल
उदयपुर । भारतमा ३ सन्तानकी आमा र २० वर्षीया युवकबीच प्रेम बढ्दै गएपछि उनीहरुले एउटै डोरीमा झुण्डिएर हात्महत्या गरेका छन्।
खबर अनुसार उनीहरुको प्रेमले चर्चा पाउन थालेपछि एउटै डोरीमा झुण्डिएर हात्महत्या गरेको बताइएको छ ।
भारतको झाडोलस्थित उदयपुरको यो जोडी लामो समयदेखी प्रेममा रहेको र उनीहरुको प्रेमले गाउँमा चर्चा पाउन थालेपछि उनीहरुले आत्महत्या गरेको हुन सक्ने बताइएको छ।
तर उनीहरुको साथबाट कुनै सुसाइड नोट फेला नपारेको बताइएको छ । प्रहरीले उनीहरुका परिवारसँग सोधपुछ गरिरहेको समाचारमा उल्लेख छ।
धेरै खुल्लापन हुनुपनि सम्बन्धको लागि हानिकारक हुनेगर्छ । ज्यादा खुल्लापनले पनि पार्टनरसँग झगडाको वातावरण धेरै बन्ने गर्छ ।
सञ्चारकर्मी ऋषि धमला पत्नी एलिजा गौतमको निर्माण तथा अभिनय रहेको फिल्म अनुरागको छायाँकन दुई वटा गीत बाँकी राखेर सकाइएको छ । दरबारमार्गको एक क्लबमा गरिएको ’कान्छा दाई गाना बजाइ देऊ न’ बोलको गीतमा एलिजा गौतम र कार्टुञ्ज क्रुजका सरोज अधिकारी फिचरिङ छन् ।
एरिका फिल्म्सको ब्यानरमा बनेको अनुराग सांगीतक प्रेम कथा बोकेको फिल्म हो । किरण दाहालको कथा, ताराप्रकाश लिम्बु र सरोज पोखरेलको संगीत रहेको फिल्ममा रामकुमार के.सीको छायांकन छ ।-फ्रीनेपालीन्युजबाट |
Prevश्याम परदेशीलाई उपस्थित गराउन प्रहरीलाई पत्र । विरामी बेच्दै सरकारी अस्पतालका डाक्टरहरु । (भिडियो सहित) जनतासंग सिधाकुरा
Nextइजरायलले कृषिमा यसरी गरिरहेको छ चमात्कारिक प्रगती
लालबाबु साईकल चढेर पेट्रोलको पैसा खाने भष्ट्रचारी हुन् जहाँ भेट्यो त्यही कारवाही गर्छु- हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
चाइनाको चर्चित पत्रिकामा पहिलो पृष्ठमै ओलीको अन्तवार्ता आएपछि भारतमा हंगामा ( पुरा विवरण सहित फोटोफिचर)